Yaan Lagaaga Sheekaynin Furitaanka Horyaalka Soomaaliya 2016-2017.
Sunday, May 27th, 2018 - 18:51:57
Thursday November 17, 2016 - 09:47:59 in Wararka by Kubad Bile
Horyaalka Soomaaliya xili ciyaareedka 2016-2017 ayaa bilwaandoono 18-November, xili uu yahay kii ugu adkaa shantii sano ee lasoo dhaafay.
Xiriirka Kubbada cagta Soomaliya ayaa ku jira da’daalo iyo hormarin ku Aadan guud ahaan Kubbada cagta dalka iyagoo sanadka qariibka ah ee 2016 ku guleystay in ay si heer saro u diyaariyaan garoomada Banaadir Stadium iyo Jaamacadaha oo ku yaalo caasimada dalka ee Moqdisho.
Hadaba Ololaha 2016-2017 Maxaa Cusub
Afar tababare oo kasoo jeeda Bariga fog ee qaarada Afrika ayaa kala hogaamindoona kooxaha weyn ee dalka waxayna kala yihiin Banaadir SC,Heegan,Gadiidka,Elman.
Banaadir SC,Horseed,Dekedda,Heegan,Gadiidka,Elman lixdaas kooxda waxaa shabaqooda ilaalindoono gool hayaal kala duwan oo iyagan u dhashay isla qaarada Afrika.
Yuusuf Cali Nuur (Yuu Cali) ayaa 2-sano ka dib kusoo noqday xirfada tababarnimo isagoo hogaamindoona kooxda dhaqaalaha badan ee Dekedda, xili uu horay usoo maamulay kooxda Elman iyo xulka qaranka dalka.
Qaasim Siidow Xuseen (Baa’ruud) ayaa hal ciyaareed ka dib dib ugu soo laabtay kooxda Elman,isagoo Elman kula guleystay 6-Horyaal Xagaagan wuxuu u yahay kii in uu Elman u safto sanadkiisa 16-aad.
Salaad faarax iyo Cumar Caruus oo kala hogaamiyo kooxaha Jeenyo iyo Horseed ayaa ah maclimiinta kaliya ee kasoo muuqday afarta sano ee lasoo dhaafay Horyaalka Heerka koowaad ee Soomaaliya.
Hogaamiyaha Naadiga Jeenyo Salaad Faarax ayaa kooxdiisa horkacaya afar sano oo xariir ah,halka kooxaha kala duwan ee dalka ay saxiixyo kala duwan ee dhanka macalimiinta sameeyeen.
Sidoo kale Cumar Caruus ayaa soo hogaamiyay afarti sano ee lasoo dhaafay kooxaha Banaadir SC, Waxool-Singjet iyo Horseed oo uu hada hogaaminayo.
Waa markii 3-aad oo kooxda Heegan lagu daah furo Horyaalka Soomaliya shan sano gudahood.
Kooxda Kubbada cagta Singjet ayaa kal ciyaareedkaan ku ciyaaridoonto magaca Wasaarada xanaanada iyo xoolaha ee Waxool.
Kooxda Dekedda ayaa noqotay kooxda sameysay saxiixyada ugu waaweyn ee Xagaagan iyadoo gacanta kusoo dhigtay xidigaha ugu tunka weyn ee dalka iyagoo laf dhabar u ahaa kooxihii ay kasoo hayaameen.
Ololaha 2016-2017 ee Horyaalka Soomaaliya ayaa si toos looga daawandoono Tv-yada kala ah Acces TV iyo Muqdisho Cable TV, halka bulshada kalane ay ka heli karaana baraha buslahda.
Kooxaha sida hordhaca ah ee loo saadalinayo Horyaalka Soomaliya ayaa ah Dekedda, Jeenyo, Heegan iyo kooxda difaa canayso horyaalka dalka eeBanaadir SC.
Feysal Xasan Xaashi oo ka tirsan Jeenyo.Jabriil Xasan Fariid oo ka tirsan Heegan,Bile Muxyidiin Buraale oo ka tirsan Dekedda,Daadir Amiin Cali oo ka tirsan Banaadir SC,C/llahi Nuur Cali,oo ka tirsan Elman, iyo Salengo Matengo oo ka tirsan Gadiidka ayay u badantahay in qaataan kabta dahabka ee Xagaagan.
Horyaalka Soomaaliya 2016-2017 ayaa haysanin wax maal gelin ama (Sponsorship).
Falanqeeyaha caanka ah ee Maxamed Xuseen Qalinle ayaa xagaagan shax ka sameeyay suuqa kala iibsiga ee Horyaalka Soomaaliya 2016-2017.
Gool Haye: -Aweys Xaaji Amiin-(Banaadir SC)
Daafacyda: -Xasan Siidow Hilowle-(Dekedda), Xamze Maxamed Muqtaar-(Elman), Daadir Salaad Cawaale-(Jeenyo), Maxamed Cabdiraxiin Cali (Horseed),
Qadka Dhexe: -Axmed Xasan Macaane-(Dekedda), C/Caziiz Maxamed Cali-(Dekedda), Mahad Maxamed Mahad-(Heegan).
Weerarka: -Bile Muxyidiin Buraale-(Dekedda), Maxamed Nuur Cabdi-(Jeenyo), Cabdi risaaq Abuukar Rooble-(Heegan).
Si kastaba Horyaalka Soomaliya 2016-2017 ayaa ah xagaagan mid aad ugu sareeya shantii sano ee laso dhaafay.
Xigasho Boga Facebook Maxamed Xuseen Qalinle:
Xuquuqada Sawirka Garoonka waxaa leh Acces